Allgedo.com » 2012 » October » 23
Home » Archive Daily October 23rd, 2012
War Deg Deg ah: Wariye katirsan Universal oo Goordhow Laascaanood lagu dilay
Wararka Caawa ka imaanaya Magaaladda Laascaanood ayaa sheegaya in dil loo gaystay wariye katirsanaa Tv-ga Universal. Alla ha unaxariistee Axmed Sakiin Faarax ayaa lagu toogtay Bartamaha Magaaladda Laascaanood. Tifaftiraha Tv-ga Universal Ridwaan Xaaji ayaa inoo xaqiijiyay geerida Axmed Sakiin Faarax. Faah Faahin dheeraad ah dib kala soco AOL insha Allah Read More →
Hay’ada Danbi baarista oo soo bandhigtay dad lagu helay danbiyo kala duwan
Hay’ada danbi baaritsa dowlada Soomaaliya ayaa goordhow Magaaladda Muqdisho kusoo bandhigtay dad ku eedeysan in ay falal kala duwan ka gaysteen gudaha Muqdisho. Dadkan ayaa tira ahaan gaaraya 18, waxaana intooda badan ay ku eedeysan yihiin in ay katirsanaayeen kooxda Shabaab. Waxaa ku jirta Haweeenay lasheegay in ninkeeda uu xili hore isku qarxiyay banaanka xarunta Madaxtooyada ee Magaaldda Muqdisho. Sidoo...
Ahlu Sunna Waljamaaca oo Guriceel ku qabatay Saraakiil Shabaab ah
Wararka ka imaanaya Magaaladda Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaas ay ciidamada Ahlu Sunna Waljamaaca kusoo qabteen rag katirsan kooxda Shabaab. Ragaan ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Magaaladda Guriceel kadiob markii ay kasoo dageen diyaarad rakaab ah oo ay la socdeen. Muuse Tashade madaxa dhinaca amniga ahlusuna ee Guriceel ayaa sheegay in ragaan lagu qabtay garoonka diyaaradaha...
Sidee Dalka Soomaaliya Looga Saari Karaa Liiska Dowladaha Fashilmay ee Caalamka !!!
Xalka dhibaatada ka jirta ama heysata dadka soomaaliyeed laguma soo koobi karo maqaal kaliya laakin waxaan isku dayayaa intii aan awoodo inaan iftiimiyo ilaa xad, walow wax kasta oo caalamkan ka jira uu allah xalkooda haayo Soomaaliya wexey hormuud u tahay wadamada aduunka looga yaqaano dowladaha fashilmay oo eey safka hore kaga jirtaa waxaana taa sabab u ah soomaaliya oo aan leheen dowlad awood leh...
Dagaal ka dhacay gobolka Jubada Hoose
Wararka naga soo gaaraya gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal qasaaro gaystay. Dagaalkan ayaa ka danbeeyay kadib markii ciidamada Al-Shabaab ay jidka ugaleen ciidamada Huwanta ah xili ay kusii jeedeen deegaanka Kalbiyow oo kudhow Kismaayo. Inkastoo aan la ogayn qasaaraha rasmiga ah ee dagaalka, hase ahaatee dagaalka oo aad uxooganaa isla markaana soconayay ku dhawaad hal...
Uganda oo qiratay in askar looga dilay Soomaaliya
Dowlada dalka Uganda ayaa sheegtay in dagaal dhawaan ka dhacay gobolka Sh/Hoose looga dilay qaar kamid ah askarteeda. Sargaal katirsan dowlada dalka Uganda ayaa sheegay in ilaa afar askari looga dilay dagaal ka dhacay Sh/Hoose. Ciidamo katirsan Shabaab ayaa weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee Bali-doogle halkaas oo ay ku dileen afarta askari ee Uganda kasoo jeeda. Sargaalka ayaa intaas ku daray...